Wajiga dahsoon ee qaraxyada kusoo batay Muqdisho |
Wajiga dahsoon ee qaraxyada kusoo batay Muqdisho
Ugu yaraan 15 ruux ayaa ku geeriyootay qarax xooggan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, xilli ay maalmahan si aad ah usoo badanayeen qaraxyada oo khasaare badan dhaliyay.
20 qof oo kale ayaa lasoo tabiyay in ay ku dhaawacmeen qaraxan loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lala beegsaday makhaayad ku taalla waddada muhiimka ah ee Maka Al-Mukarama.
Qaar ka mid ah dadkii dhaawacmay ayaa ku geeriyooday Isbitaallada Magaalada Muqdisho ee loo gudbiyay, sida laga soo xigtay shaqaalaha gaadiidka gurmadka degdegga ah.
Ma jirto faahfaahin ay saraakiisha amniga ee Soomaaliya kasoo saareen weerarka maanta dhacay oo dadkii ku waxyeelloobay ay u badnaayeen shacab ka cunteynayay makhaayadda la bartilmaameedsaday.
Dhawaqa qarax ayaa laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah magaalada
Sabtidii lasoo dhaafay ayey 15 ruux ku geeriyoodeen qaraxyo iyo israsaaseyn daba socotay oo dhex martay xubnaha Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya.
Sheekh caan ah oo ku dhaawacmay Qaraxa
Dadkii ku dhaawacmay qaraxa maanta, oo burbur hantiyeedna geystay, waxaa ka mid ah Sheekh Yuusuf Cali Caynte, oo ah guddoomiyaha ururka Majmaca Islaamka ee Culumada Soomaaliyeed.
Lahaanshaha sawirka ABDI AYNTE
Sheekh Yuusuf Cali Caynte
Sheekh Caynte ayaa sidoo kale ah aabaha wasiirkii hore ee wasaaradda Qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte, kaasoo ka tirsanaa xukuumaddii uu madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Isbitaal ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa lagu daweynayaa sheekha dhaawacmay oo si weyn looga yaqaanno bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda.
Qaraxyada kusoo batay Muqdisho
Muddo bil gudaheed ah waxaa magaalo madaxda Soomaaliya ka dhacay ilaa 12 qarax oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac u geystay dad rayid ah iyo howl wadeennada dowladda Soomaaliya.
Wasiir ku xigeenkii wasaaradda Shaqada iyo shaqaalaha ayaa lagu dilay qaraxyo dhowr ah oo maalmo ka hor lagu weeraray xarun ay labo wasaaradood ku howl galaan oo ku taalla Muqdisho.
Lahaanshaha sawirkaRADIO DALSAN
Image captionWasiir ku xigeenkii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha
Wararka laga helay dhacdadaas ayaa sheegayay in wasiir ku xigeenka oo lagu magacaabi jiray Saqar Ibraahim Cabdalla lagu dilay xafiiskiisa dhexdiisa, ka dib markii ay rag hubeysan guda u galeen dhismaha wasaaradda.
Mas’uulkaas ayaa sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Muxuu yahay wajiga dahsoon ee Qaraxyada xoogeystay?
Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababta ka dambeysa qaraxyada kusoo batay Muqdisho, haddana dadka falanqeeya arrimaha gobolka iyo xaaladda Soomaaliya ayaa sheegaya in ay jirto sabab saameyn leh.
Qaar ka mid ah xeel dheerayaasha ayaa BBC-da u sheegay in arrintan uu sababay culeyska Al-Shabaab kasoo wajahay duqeymaha ay kala kulmaan diyaaradaha drones-ka ee Mareykanka.
Labadii sano ee lasoo dhaafay ayey xukuumadda madaxweyne Donald Trump dardar galisay howlgallada ka dhanka ah deegaannada ay fariisimaha ku leeyihiin Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya.
Dagaallameyaasha kooxdan ayey falanqeeyeyaashu sheegeen iney hadda isku dayayaan sidii ay gabbaad uga dhigan lahaayeen magaalada Muqdisho, iyagoo kasoo baxsanaya deegaannadii duqeymaha lagula beegsanayay.
Maadaama ay xooggooda isugu keeneen Muqdisho, waxaa ka dhashay in ay fuliyaan qaraxyo isdaba joog ah.
Dhanka kale, warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa dhawaanahan baddashay qaabkii ay u tabin jirtay wararka ku saabsan qaraxyada iyo weerarrada ay mas’uuliyaddooda sheegtaan Al-Shabaab.
Raadiya, telefishinka, wakaaladda wararka iyo warbaahinta kale ee dowladda ayaa inta badan ka gaabsada inay soo tabiyaan dhacdooyinka noocan ah.
Arrimo kale oo kusoo beegmay qaraxyada kordhay
Iyadoo horay ay Muqdisho uga dhici jireen qaraxyo khasaare geysta, weerarrada ugu dambeeyay ayaa kusoo aaday xilli ay qaar ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya ka gadoodeen mushaar la’aan soo food saartay, iyagoo isaga baxay deegaanno muhiim ah, si ay cabashadooda u muujiyaan.
Dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayey ku dhaliileen inay ka dhabeyn weyday ballan qaadyo ay horay ugu sameysay oo ahaa in aan laga daahin doonin mushaarka.
Qaraxyada Muqdisho ka dhaca you saamayntooda
Sidoo kale waxay dhacdooyinkii ugu dambeeyay kusoo beegmeen xilli isbaddal lagu sameeyay taliyeyaashii ciidamada booliska ee degmooyinka gobolka Banaadir.
Ujeeddada loo baddalay taliska ciidamada ayaa lagu sheegay inay tahay sidii wax looga qaban lahaa habcsanaan dhinaca amaanka ah.
Qaraxa ugu dambeeyay ee maanta ka dhacay waddada Maka Al-Mukarama ayaa kusoo aaday xilli ay xirnaayeen waddooyinka magaalada Muqdisho.
Dhimashada iyo dhaawaca ka dhasha qaraxyada ka sokow, waxaa jira bur bur hantiyeed oo uu sababo weerar walba oo laga fuliyo magaalada Muqdisho.
Weerarradan ayaa intooda badan lala beegsadaa xarumo ganacsi oo isugu jira hoteello, makhaayado iyo meelo kale, kuwaasoo ku bur bura awoodda qaraxa iyo falcelinta ciidamada amaanka.
Mararka qaar wuxuu burbur kaas la mid ah sidoo kale gaaraa dhismeyaal ay leeyihiin dad rayid ah.
Dhanka kale waxay weerarradu saameyn xoog leh ku yeesheen dhaqdhaqaaqyadii dadweynaha iyo habsami u socodkii ganacsiga.
Dad badan oo ganacsato ah ayaa guryahooda ku sugan, iyagoo walaac ka qaba inay waxyeello ka soo gaarto weerarrada maalmihii dambe soo xoogeystay.
Sannadkii 2011-kii ayaa Al-shabaab laga saaray qeybo muhiim ah oo ay gacanta uga hayeen magaalada Muqdisho, tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyayna waxay diiradda saarayeen weerarro qorsheysan.